एक महिनामा म*हामारीको ‘ट’र्निङ पो’इन्ट’ आ’उने विज्ञको दा*बी । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
एक महिनामा म*हामारीको ‘ट’र्निङ पो’इन्ट’ आ’उने विज्ञको दा*बी ।
चीनका प्रमुख स्वास्थ्य स’ल्लाहकार डा झो’ङ नानाशानले अप्रिल महिनाको अन्त्य’सम्ममा को_रोनाभाइरस महाव्याधिको टर्निङ पोइन्ट आउने दा*बी गरेका छन् ।
यी ८३ वर्षीय संक्रामक रोग विशेषज्ञले चीनमा शक्तिशाली निगरानी प्रणाली भएका कारण सं*क्रमणको दोस्रो लहर नदेखिने पनि भविष्यवाणी गरेका छन् ।”डा झोङले शेनजेन टेलिभिजनमा बुधवार अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यो कुरा ब*ताएका हुन
उनले भने, ‘कोरो*नाभाइरस उच्च सं*क्रामक छ र यसको मृत्युदर पनि उच्च छ । यसलाई रोक्न दुईवटा विधि छन् । पहिलो, संक्रमण दरलाई न्यून स्तरमा पुर्‍याउने र फैलिनबाट रोक्ने ।
दोस्रो, संक्रमण रोक्ने र रोगीहरू’को संख्या घटाउनका लागि उपचार गर्ने । विभिन्न मुलुकले कडा उपाय अपनाइरहेकाले अप्रिलको अन्त्यसम्म पुष्टि भएका नयाँ केसहरूमा कमी आउने मेरो अनुमान छ.
डा झोङले देशमा नयाँ संक्रमणको खतरा रहेको भन्ने दाबीलाई खारेज गरे । लक्षण नदेखिएका मौ*न वाहकहरूले संक्रमण सार्ने भनी चेतावनी दिइएकोमा उनले त्यसलाई खा*रेज गरेका हुन् ।लक्षण नदेखिएका केसमा उ*च्च सं*क्रमण दर हुने कुनै प्रमाण फेला नपरेको उनले बताए ।
Previous द्वारिकलाल चौधरी भन्छन् : ६ महिना लकडाउन भएपनि कुनै गरिबलाई भोको हुन दिन्नँ !
Next स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भन्छन् : मेडिकल उ’पकरण ख’रिदमा उठेका प्रश्नको ज’वाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन।